Izizathu Eziphezulu Zokufuna Iseluleko Sezomthetho Kummeli | Izinkampani Zomthetho eDubai
Izizathu Eziphezulu Zokufuna Izeluleko Zomthetho Kummeli
Ngabe unesifiso sokwazi ukuthi kungani kufanele ufune izeluleko zomthetho ku-UAE kummeli? Abantu abaningi bavame ukugwema umcabango nje wokusebenza nommeli ngoba benomuzwa wokuthi ukwenza kanjalo kuzobaholela ezindlekweni ezinkulu.
izingxabano zebhizinisi, izingxabano, amacala, izindaba zomndeni
Zihlukanise nezinkinga zomthetho
Noma kungezona zonke izingqinamba ezingokomthetho ezingadinga izinsizakalo zommeli, lochwepheshe wezomthetho noma ummeli udlala indima enkulu ekupheliseni izinkinga zakho.
Ummeli udlala indima enkulu ekupheliseni izinkinga zakho
Yize kungeyona into eshibhile ukuqasha ummeli omuhle noma ummeli eDubai noma e-UAE, ungathembela kubo ukuthi bakusize uzibandakanye ezinkingeni zomthetho ezinamathela njengezicelo zokulimala kwezingozi, ukungahambi kahle kwezokwelapha, izingxabano zebhizinisi, izingxabano, amacala , izimangalo zomshuwalense, izikhalo, ibheyili, ingxabano yerenti, isehlukaniso nokugcinwa kwengane.
Ngezansi kunezizathu ezinhle kakhulu zokuthi kungani ukufuna izeluleko zomthetho eDubai kusuka kummeli kunengqondo ngokuphelele:
Umthetho e-UAE udinga ukutolika okuhle.
Ngaphandle kokuthi ungummeli oqeqeshiwe ngokwakho noma umeluleki wezomthetho, kungcono ukuthi udlulisele umsebenzi wokuchazwa komthetho kochwepheshe futhi wenqabe ukwenza njengawo. Njengoba nje uyazi, ngisho nabameli abanolwazi kakhulu nabo bafuna izeluleko zabanye abameli lapho bebhekene nezinkinga zomthetho.
Okwamanje, ukungafuni ukuthola usizo lwabeluleki bezomthetho be-UAE lapho ubhala izinkontileka, ukuqala ibhizinisi elisha, noma ubhekene nokunye ukukhathazeka ngemithelela yezomthetho okungenzeka kungaholela ezingcupheni obekungenakuzigwema ngenye indlela.
Abameli banekhono ebufakazini obuyinselele.
Kunezikhathi lapho amaqembu okushushisa enza umsebenzi wawo wokuqoqa ubufakazi ngokungafanele. Ufakazi wohlobo oluthile angagcina ephikisana nesitatimende esenziwe ngaphambili. Yilapho ubuchwepheshe bezomthetho bommeli wakho buba khona lapho ezokwazi ukuthola ubufakazi futhi aqinisekise ubuqiniso bawo.
Ungonga imali ethe xaxa uma ufuna izeluleko zomthetho zommeli.
Amacala embango angagcina alimaze imali yakho noma angakusiza wenze imali eningi. Ngokuqasha ummeli onamava, ungaqiniseka ukuthi uzoliphumelela leli cala lakho, noma ngabe kungukulungiswa kwesehlukaniso, isimangalo somshuwalense, isimangalo sengozi, ukungahambi kahle kwezokwelapha, noma ukungcola. Futhi, kuhle ukwazi ukuthi abameli abaningi bomphakathi abakhokhisi imali ngaphandle kokuthi icala seliphumelele.
Yazi abantu ababalulekile ngaphakathi kwendilinga yezomthetho.
Abameli baziwa ngenethiwekhi yabo ebanzi yabachwepheshe emkhakheni wezomthetho abazokwazi ukukusiza ecaleni lakho ngokubonisana nomthetho okufanele, kufaka phakathi ofakazi abangochwepheshe nabaseshi abazimele. Baxhumana futhi basebenze nalaba bantu njalo. Bangasebenza nama-24/7 ukuqiniseka ukuthi uzonqoba empini yakho yezomthetho.
Abameli bangaphatha zonke izinqubo zomthetho ngendlela eyiyo.
Uma ungaqeqeshiwe emkhakheni wezomthetho, ungahlangabezana nobunzima ekuthini kulandeleni inqubo efanelekile yokuthi ungawafakela kanjani amaphepha asemthethweni. Ukufika sekwedlule imizuzu embalwa noma ukufayila okungalungile kungahlehlisa icala bese sikwenze kwehluleke ngokuphelele.
Lezi ngezinye zezizathu zokuthi kungani ufune izeluleko zomthetho zommeli. Izindaba ezimnandi ukuthi abameli abaningi be-UAE bahlinzeka ngokubonisana kwezomthetho kwasekuqaleni ngakho-ke bekungalimazi ukukhuluma noyedwa.